Rising Sun Pictures 'Thomas Maher သည်လူငယ်အနုပညာရှင်များ၏စိတ်ဓာတ်ကိုအလုပ်အကိုင်အဖြစ်ပြောင်းလဲရန်ကူညီပေးသည်။ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Rising Sun ကရုပ်ပုံများ '' သောမတ်စ် Maher လူငယ်အဆိုတော်များ Careers သို့သူတို့၏စိတ်ဓာတ်ပြင်းပြ Turn ကူညီပေး
Maher သည်ကျောင်း၏ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်ပြီးဆုံးပြီးနောက်စာသင်ခန်းအားအထူးစိတ် ၀ င်စားမှုယူဆောင်လာသည်။
သြစတြေးလျတောင်ပိုင်း၊ အက်ဒလိတ်ဒ် - သောမတ်စ်မာဟာ Rising Sun Pictures ပညာရေးရဲ့သင်ကြားရေးဝန်ထမ်းရဲ့အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ Adelaide ဇာတိသည် Rising Sun Pictures (RSP) နှင့်သြစတြေးလျတောင်ပိုင်းတက္ကသိုလ် (UniSA) နှင့် တွဲ၍ အပ်နှင်းထားသော 2017 ရှိ Dynamic Effects and Lighting ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်ကိုပြီး။ သူသည်ပရိုဂရမ်၏ကျောင်းသားတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ Adelaide VFX ဆိုင် Resin တွင်အနုပညာရှင်အဖြစ်အတွေ့အကြုံရပြီး TAFE ရှိ Houdini နှင့် Nuke အခြေခံများကိုသင်ကြားပြီးနောက် Tom သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က RSP သို့ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဒန်ဝီလ်အားဒိုင်နင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အလင်းရောင်ဆိုင်ရာဘွဲ့လွန်လက်မှတ်သင်တန်းနှင့် Compositing, Paint and Roto နှင့်အခြားဘာသာရပ်များတွင်တွဲဖက်သင်ကြားပေးသောသင်တန်းတွင်လက်ထောက်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည်စတူဒီယိုတွင်အနုပညာရှင်တစ် ဦး အနေနှင့် blockbuster hit အပါအ ၀ င်ရုပ်ရှင်အတော်များများကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း.
တွမ်သည်ကျောင်းသားများကြားတွင် Houdini နှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်၊ ခက်ခဲသည့်အယူအဆများကိုရိုးရှင်းပုံရသည်နှင့်သူစာသင်ခန်းသို့သူစိတ်အားထက်သန်လာသည်။ သူကစာသင်ခန်းထဲမှာသူတွေ့ခဲ့တဲ့အနုပညာရှင်တွေကြောင့်သူအံ့သြသွားတယ်။ “ ကျွန်တော်ဟာသီးခြားအတန်း ၄ ခုကျော်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးကျောင်းသားတိုင်းနီးပါးကငါ့မျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်ခဲ့တယ်။ “ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုသူတို့ရဲ့နည်းပညာစွမ်းရည်၊ အနုပညာ၊ သူတို့သင်ကြားပေးတဲ့အရာတွေကိုလေ့လာပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်တဲ့မြန်နှုန်းတွေနဲ့အမြဲတမ်းစွဲမှတ်စေတယ်။ သူတို့ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ဖော်ရွေ၊ ရင့်ကျက်ပြီးအရည်အချင်းရှိတယ်။
သူ၏ကျောင်းသားများကဲ့သို့ပင်တွမ်သည်လူငယ်ဘဝတွင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းမှအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုနှစ်သက်ခဲ့သည်။ သူသည်အထက်တန်းကျောင်းတွင်ရုပ်ရှင်ကားတိုများရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Adelaide တက္ကသိုလ်နှင့် TAFE SA တွင်တရားဝင်လေ့ကျင့်မှုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်မျက်နှာနှင့်မီဒီယာတွင်အဆင့်မြင့်ဒီပလိုမာရရှိခဲ့သည်။
TAFE ကျောင်းတက်နေစဉ်တွင် Tom သည် RSP ၌ Houdini ကိုလေ့လာရန်တိုတိုသင်တန်းနှစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည်အတွေ့အကြုံများစွာကိုရရှိခဲ့ပြီးသူသည်ဘွဲ့ရပြီးနောက်ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ သူသည် Dynamic Effects and Lighting သင်တန်းမှတဆင့် Houdini ကိုကျွမ်းကျင်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးအတွေ့အကြုံအားဂိမ်းလဲလှယ်သူအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်ကိုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရန်ကူညီခြင်းသာမကသူ၏စိတ်အားထက်သန်မှုကိုတစ်သက်တာလုံးအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့သည်။
"ဒါဟာစိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။ “ ကျွန်တော်ဝင်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ဟာကျောင်းသားတစ်ယောက်မဟုတ်ဘဲအသင်းသားတစ်ယောက်ပါဟုခံစားခဲ့ရသည်။ ၀ န်ထမ်းများကကျွန်ုပ်တို့အားကြိုဆိုခြင်းကိုကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ပညာရေး ၀ န်ထမ်းများမပါသည့်ကြမ်းပြင်မှအနုပညာရှင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အကူအညီများနှင့်အကြံဥာဏ်များကိုလျှော့ချပေးလိမ့်မည်။ တစ်ပတ်ကိုငါးရက်၊ အချိန်ပြည့်၊ ခင်ဗျားတကယ်အရှိန်အဟုန်ကိုတည်ဆောက်နိုင်တဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုမှာရှိနေရတာစိတ်လှုပ်ရှားစရာပဲ။ ”
ဘွဲ့လွန်လက်မှတ်အစီအစဉ်ပြီးဆုံးသွားပြီးနောက်တွမ်သည်ရက်စ်၌အငယ်တန်းအနုပညာရှင်တစ် ဦး အဖြစ်ရာထူးအတွက်သူ့ကိုအကြံမပေးမီတွမ်သည်ဘောင်းဘီတိုများနှင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များကိုလွှတ်ပြီးအလုပ်များအတွက်လူတွေ့မေးမြန်းခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ၏အခန်းကဏ္ primarily သည်အဓိကအားဖြင့် compositing နှင့် rotoscoping တို့ပါ ၀ င်သော်လည်း Netflix စီးရီးအတွက်ရေအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖန်တီးရာ၌သူ၏ Houdini စွမ်းရည်ကိုအသုံးချရန်အခွင့်အရေးရရှိခဲ့သည်။ Tidelands.
Resin မှစတင်ပြီးမကြာမီတွင် Tom သည်သူ၏ယခင် TAFE ကျောင်းတွင် Houdini ကိုဒုတိယအကြိမ်အလုပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သူဟာအတွေ့အကြုံကိုအနုပညာရှင်တွေရဲ့ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပျော်စရာများစွာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ သူကဤသို့ပြန်ပြောပြသည် -“ ငါသွန်သင်ရတာကအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်။ "ဒါဟာခက်ခဲတဲ့အလုပ်ပဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါကြိုက်တယ်၊ အထူးသဖြင့်ငါအဓိကစိတ်ဝင်စားတဲ့ Houdini ပါ။ "
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် RSP တွင်သင်ကြားမှုလက်ထောက်နေရာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ပရိုဂရမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲသောအန်နာဟတ်ဂ်သည်တွမ်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးသူသည် RSP နှင့် TAFE ၌ရှိစဉ်ကသူသိခဲ့ဖူးသည်။ သူကပြန်လာဖို့အခွင့်အရေးကိုခုန်ချလိုက်တယ် သူက“ ငါနဲ့တူတယ်၊ "RSP ကိုပြန်လာပြီးစားပွဲခုံရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာရှိနေရတာအရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းတယ်။ "
တွမ်သည်သူ၏ကျောင်းသားများနှင့်ကောင်းမွန်စွာအတူနေခဲ့သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ သူဟာသူ့စာသင်ခန်းထဲကလူငယ်အနုပညာရှင်အများစုထက်အများကြီးမကြီးဘူး၊ မကြာသေးခင်ကအစီအစဉ်ကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ရုန်းကန်မှုများနဲ့အောင်မြင်မှုများကိုခွဲခြားသိမြင်ရန်လွယ်ကူသည်။ သူက“ ကျွန်မပထမ ဦး ဆုံးအလုပ်စတင်ကတည်းကကျောင်းသားကနေပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနုပညာရှင်နဲ့ဆရာဖြစ်အောင်ပြောင်းတာနှစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ “ စက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ရှုခင်းကသိပ်မပြောင်းပါဘူး။ သင်သည်လျှောက်လွှာများကိုပေးပို့သည့်အခါအမြဲတမ်းပြန်ကြားခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်စိတ်ဓာတ်ကျစေနိုင်သည်၊ သို့သော်သင့်ကိုယ်ပိုင်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်အောင်ထပ်မံလျှောက်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဒါကခက်ခဲတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်သင်ယူလိုက်တာပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့ကျောင်းသားတွေကိုစိတ်ရှည်ဖို့၊ သူတို့ကိုလည်း RSP ကပေးတဲ့အလုပ်အကိုင်အရင်းအမြစ်တွေအားလုံးကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချဖို့ကျွန်တော်အားပေးပါတယ်။ ”
ထိုအရာကိုရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်သူ၏အနာဂတ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရန်ကျောင်းသားများကိုအကြံပေးသည်။ သူက“ VFX ထဲမှာဘယ်အခန်းကဏ္roleကိုသင်လိုက်ချင်တယ်ဆိုတာစဉ်းစားပါ။ “ အစပိုင်းမှာတော့သူတို့အားလုံးဟာတော်တော်လေးဆင်တူနေပုံရတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုလမ်းကြောင်းကို ဦး တည်သွားတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးတွင် compositor ဖြစ်လာရန်သင်၏နှလုံးသားကိုတပ်ဆင်ထားပါကဥပမာအားဖြင့် paint and roto ကဲ့သို့သောအငယ်တန်းအခန်းကဏ္ lead သည်၎င်းကို ဦး ဆောင်လမ်းပြသည်ကိုရှာဖွေပြီးထိုစွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေရန်လုပ်ဆောင်ပါ။ သင်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်လိုသည်ကိုမသေချာပါကအခြေခံကျသောအရာများကိုနည်းနည်းဖြင့် အခြေခံ၍ သင်ယူပါသို့မဟုတ်အိမ်တွင်သင်အဘယ်အရာသင်ယူနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ သင်မကြိုက်သောအရာကိုနှင့်သင်၏စိတ်အားထက်သန်မှုသည်မည်သည့်နေရာတွင်လျင်မြန်စွာသင်ယူနိုင်လိမ့်မည်။ အကောင်းဘက်ကဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုပိုကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပေးပြီးပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့အလုပ်အတွက်ပိုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်။
“ မင်းမှာအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်ဆိုရင်ငါလိုပဲမင်းကြည့်သင့်တယ်။ Adelaide နဲ့ကမ္ဘာတလွှားမှာအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုဆိုင်ရာအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဘယ်တော့မှပိုကောင်းတဲ့အချိန်မရှိခဲ့ဘူး။ ”
ကျွန်ုပ်တို့၏စတူဒီယို, Adelaide, တောင်သြစတြေးလျမှာတည်ရှိပါတယ်ခံ၏အားသာချက်အတော်ပင်ကမ္ဘာ့အများဆုံး liveable မြို့ကြီးများ၏တဦးတည်း။ , ငါတို့ဟာအဲဒီအဂုဏ်သတင်း, နှင့်အကြီးဆုံးနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြန်အမ်းတစ်ဦးမှဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ပေါင်းစပ်, RSP ကျယ်ပြန့်ရုပ်ရှင်-ထုတ်လုပ်သူကမ္ဘာကြီးတစ်ခုသံလိုက်စေသည်။ ဒါကဆက်လက်အောင်မြင်မှုဖို့ကျွန်တော်တို့ကို propelled နှင့် Spider-Man အပါအဝင်စီမံကိန်းများကိုတစ်အကွာအဝေးကိုအထောက်အကူပြုဖို့ RSP enabled ထားပါတယ်: တိုက်ပွဲအိန်ဂျယ်က The Predator, Tomb Raider, ပေတရုယုန်, တိရိစ္ဆာန်ကမ္ဘာ့ဖလား, Thor: မူလစာမျက်နှာ, ဗိုလ်ကြီးအံ့ဩခြင်း, Dumbo, Alita မှစ. လယ်ယာ: Ragnarok, Logan, ပန်, X-Men ဂိမ်းနှင့် Thrones ၏ဂိမ်း။
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ပညာရေး ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ကိုလိုနီ / ချီကာဂို လေ့ကျင့်ရေး TVU ကွန်ယက် VFX Visual Effects 2019-10-08
ယခင်: ကိုးကွယ်မှုလွှ Solutions ၏အသက်ဘုရားကျောင်းကို select VITEC အိမ်များ
နောက်တစ်ခု: Intern, ထုတ်လုပ်မှု # 514-20 ။